SlimBook: malaptop akagadzirwa kuSpain neLinux | Linux Vakapindwa muropa
Slimbook inotiunzira, kubva kuSpain, chimwe chinhu chakafanana neicho VANT yakatipa kusvika parizvino, chimwe chiratidzo cheSpanish icho chakatsaurwa kuunganidza makomputa neakafanogadzwa Ubuntu anoshanda system. Chete mune ino kesi SlimBook yakanangidzirwa pamusika weLaptop (kunyanya ma ultrabook, ayo ari mukuda kwakadai nguva pfupi yapfuura) maunogona kusarudza pakati pekuve iine pre-yakaiswa Windows 8 kana 10 sisitimu inoshanda kana yeLinux imwe.
Pakati pesarudzo dzakapihwa Linux-based operating system, tinogona kusarudza pakati Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu MATE, Debian, openSUSE, Fedora, Linux Mint, pamwe nevamwe vakaita saAntegros. Ose akafanogadzirwa, anosarudzika panguva yekutenga, uye pasina mari yekuwedzera. Kune rimwe divi, avo veMicrosoft vanozove nemari dzekuwedzera dzerezinesi iri pakati pe120 ne180 euros zvakare ichafanirwa kuwedzerwa pamutengo wekupedzisira.
Sezvauri kuona, kusarudzwa kweanogona kutanga-kuiswa Linux anoshanda masisitimu haagumirwe kuUbuntu sevamwe vakwikwidzi. Uye kana yako uchishandisa system isiri pakati pezvinyorwa, usanetseke, Slimbook zvakare inokupa iwe malaptop isina yekushandisa system kukusiira rusununguko ruzere rwekusarudza, kungave kumwe kugoverwa kweLinux, FreeBSD, nezvimwe. Kunyangwe neavo vakasarudzwa nekambani, kuenderana kweako Hardware kuri 100% kunovimbiswa. Kunyangwe pasina zvakawanda zvekusarudza kubva maererano nezvinhu, asi inhau dzakanaka ...
Kana iri hardware, parizvino inopa mana mamodheru ane simba, mutete uye akareruka, ayo asina mutengo wakaderera. Dhizaini yayo haina kushata zvachose, uye mukati vanounza akasiyana masisitimu ehurdhi e499, 599, 699 uye € 799 neIntel Celeron, i3, i5 uye i7 zvichiteerana. Iko kukanganisa kwandinoona iyo kadhi yemifananidzo, inova Intel. Kune rimwe divi, inosanganisira Samsung kana Crucial brand SSD hard drive, 13 ″ screen, WiFi, Bluetooth, USB 3.0, aruminiyamu yekunze kupedzisa kuti zvirinani kupisa kupisa (kushandura iyo kesi kuita huru heatsink) ...zvimwe pawebsite yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » SlimBook: malaptop akagadzirwa kuSpain neLinux
Joan Francesc akadaro
Kutarisa kumberi kune uya wandakabvunza :-)
Pindura Joan Francesc
Nhau huru. Kunyangwe kwandiri, pachangu, ini handifarire Windows zvachose kana ndichigutsikana nenhau idzi nekuti izvozvi zvinokwanisika kutenga laptop pamitengo yemusika uye haufanire kubata naUefi nezvose izvi zvigadzirwa. Chinhu chakashata chandinoona ndechekuti hadzibatanidze chinhu chekuverenga uye kukwanisa kuchinja kubva kuLinux zvaifanirwa kuitwa kuburikidza neUSB.
Iwe unotaura nezveVant mune yakapfuura nguva, vakavhara here?